कागतिहारको दिन चु’पचाप क’सैलाई था’हा न’हुने गरी किन्नुहोस्... यी ५ चीज* क’हिले हु’नेछैन धनको क’मि ! हेर्नुहोस् - Nepali news..
कागतिहारको दिन चु’पचाप क’सैलाई था’हा न’हुने गरी किन्नुहोस्… यी ५ चीज* क’हिले हु’नेछैन धनको क’मि ! हेर्नुहोस्
काठमाडौँ– पञ्चाङ्ग अनु*सार प्रत्येक वर्ष कार्तिक कृष्ण प’क्षको त्र’योदशीका अथवा काग तिहारका दिन ध’नवन्तरी त्र’योदशी अर्थात ध*नतेरस मनाउने गरिन्छ । धन त्र’योदशी र ध’नतेरस पनि यसै दिनलाई भन्ने गरिन्छ । यो दिन मूलतः आ’युर्वेदका प्रवर्तक धन्वन्तरि र धनका देवता कुबेरको ज’न्मोत्सव मनाउने प’र्व हो ।
ध’नतेरसका दिन नेपालको तराई क्षेत्रमा नयाँ-नयाँ *भाँ’डाकुडा र सुनचाँदीका गरगहना* कि’नमेल गर्ने प’रम्परा र’ही आएको छ ।ध’नतेरसको दिन सा’मानहरु कि’न्ने र दी’पदान गर्ने दिन अर्थात् ध’नतेरस पर्व साथै काग तिहार पनि हो ।
यस दिन विभिन्न वस्तु घरमा भि*’त्र्याउनाले वर्षभर धनको क’मि नहुने धार्मिक मा’न्यता रहेको छ। जानेर बु’झेर खरिद गरे देखि लक्ष्मीले कहिले साथ न’छोड्ने वि’श्वास पनि रहेको छ । ज्योतिष शा’स्त्रीहरुका अनुसार ध’नतेरसमा निम्न उ’ल्लेखित वस्तुहरु कसैलाई थाहा न’दिइ घरमा भि’त्राउदा आर्थिक ला’भ हुने गर्छ।
ध’नियाका दा’ना-धनियामा ल¥क्ष्मी माताको कृ’पा रहने मा’न्यता रहेको छ। यसै का’रण ध’नतेरसको दिन घरको बगैंचा गमला आदि स्था’नमा कसैलाई थाहा नहुने गरी ध’नियाको दा’ना छ’र्दा लक्ष्मी प्र’सन्न हुने गर्छिन्।
ग*रगहना-आ’भूषण -यस दिन आ’भूषण तथा गहना खरिद गर्नको लागि धेरै शुभ मानिन्छ। अझ कसैलाई पनि थाहा न’दिई किनेको गरगहना-आभूषण झनै शुभ हुने मा’न्यता रहेको छ। यसरी ख’रिद गरेको ग’रगहना-आ’भूषणलाई लक्ष्मीलाई अ’र्पित गर्दै धन ब’ढेर जाने मा’न्यता रहेको छ।
शंख-शंखलाई हिन्दु धर्ममा छु’टै स्था’नमा रा’खिने गरिन्छ। शंखलाई घरमा रा’ख्नाले* लक्ष्मी प्रसन्न हुने र शंक ब’जाउँदा धर शु’द्ध हुने मा’न्यता रहेको छ। धनतेरसको दिन कसैलाई पनि थाहा न’हुनेगरी घ’रमा नयाँ शं’ख ल्याएर लक्ष्मीलाई अ’र्पित गर्नाले ल’क्ष्मी प्र’सन्न हुने गर्छिन्।
झाड़ू-घर शा’न्त, सफा साथै उज्या*लो भएको अ’वस्थामा मात्रै लक्ष्मीको वा’स हुने मा’न्यता रहेको छ। यस कारण ध’नतेरसको दिन नयाँ झाडुले घर सफा गरेको शुभ हुन्छ। झा’ड़ू ख’रिद गरी कसैले नदेख्ने गरि नयाँ झाड़ूले घर सफा गरेमा लक्ष्मीको अ’नुग्रह मिल्न सक्छ*।
नुन -ध’नतेरसको दिन नुन खरिद* गर्ने कार्यलाई पनि धे’रै शु’भ मानिन्छ। यस दिन ख’रिद गरिएको नुन प्र’योग गर्नाले स्वा’स्थ्य* रा’म्रो हुने मा’न्यता रहेको छ भने नुन ख’रिद गर्दा कसैलाई नदेखाएको अ’झ प्रभावकारी हुने गर्छ।
Prevदुर्गेश थापाले यु’टुबमा फेरी अपलोड गरे नयाँ भर्स’नको डन आयो डन*…-हेर्नुहोस (भिडियो सहित) सहित
Nextस’फलताका १० सुत्र’हरु, जसले तपाईको सोचमा परिब’र्तन गरिदिने छ,एक पल्ट हेर्नुहोस्
युएईमा आफ्नै बंगाली सुपरभाइजरले भोक भोकै बन्दी बनाएर राखेका सरोजको दुवईबाट उद्धार….(पूरा खबर हेर्नुहोस)
चर्चित लोक गायिका बिमाकुमारी दुरा बर्षौपछि रुदै मिडियामा !यस्तो ठुलो घटना पनि लुकाएर बसेकी रहिछिन बिमाले -हेर्नुहोस (भिडियो सहित)